DockBar dia mpandefa fampiharana ho an'ny iPhone | Vaovao IPhone
Tianay ny manavaka ny iPhone, ary ambonin'izany rehetra izany dia manampy fampiasa izay noho ny antony iray na nanapa-kevitra ny tsy hiraharaha i Apple. Ny mpandefa fampiharana dia matetika no fomba haingana indrindra hanovana eo amin'ireo rindranasa samihafa amin'ny iPhone., fa noho izany dia mila manana Jailbreak isika. Misaotra ny developer Cole Schaefer sy ny DockBar tweak azonay nampiditra azy mora foana tamin'ny iPhone. Aza misalasala mametraka azy raha tianao ny mpandefa fampiharana satria tena ilaina tokoa izy io.
Ny tweak DockBar dia miasa tanteraka miaraka amin'ny Activator mba hahafahantsika misafidy ny fihetsika tianay hampidirina hiantso ny dock. Ity mpandefa rindrambaiko ity dia azo ovaina indrindra noho ny menio safidy tafiditra ao aminy, mila mametraka azy fotsiny isika ary mivezivezy amin'ny alàlan'ny menio setting mankany DockBar misafidy ireo fikirana fanaingoana isan-karazany. DockBar dia mamela antsika hiditra amin'ny mpandefa fampiharana avy amin'ny toerana rehetra amin'ny iOS, raha mbola ao anaty fampiharana na efijery an-trano isika. Araka ny efa nolazaintsika, amin'ny alàlan'ny tontolon'ny safidiny dia azontsika atao ny mifantina ny fisehoan'ny DockBar sy ireo rindranasa izay te hiseho amin'izy ireo.Hisafidy izay tiana ho fihetsika mampihetsika ny bara fandefasana koa izahay. Tsotra sy mora ampiasaina fotsiny izy io.
Azontsika atao ny misafidy ny hanaparitaka ireo rindranasa samihafa, manampy marika eo amin'ilay kisary na manaisotra azy ireo ary koa misafidy raha tiantsika ho zoro na boribory ny sisin'ny dock. Azontsika atao koa ny mifidy eo amin'ny loko maivana na maizina, ary koa ny loko mitambatra. Mazava ho azy, mety ho tsy ampy intsony io, afaka misafidy isika amin'ny toerana misy azy eo amin'ny ankavia na ankavanana. Ity fanovana ity dia tsy mampiseho fanjifana bateria izay tsy maintsy raisintsika, tafiditra tanteraka amin'ny kinova farany an'ny iOS izy ary miaraka amin'ny Activator, noho izany dia tena mandeha tsara izy io, ka azoko atao ny manoro ny fametrahana azy.
Mampiavaka ny fanovana
mifanentana: Hatramin'ny iOS 8.4
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » DockBar dia mpandefa fampiharana ho an'ny iPhone